Akhriso:- Shirkii Afisiyoono oo dib u dhacay & sababta ka dambeeysa - Awdinle Online
Akhriso:- Shirkii Afisiyoono oo dib u dhacay & sababta ka dambeeysa
Waxaa dib u dhac uu ku ymid Shirkii Madaxda dowladda, Dowlad Goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ee la filayay in uu maanta dib uga bilaawdo Teendhada Afisiyooni ee Magaalada Muqdisho.
Shirka oo sabtidii todbaadkaan ka bilaawday Afisiyooni ayaa socday muddo laba maalin ah, iyada oo an wax horumar ah laga gaarin, waxaana shalay ay Madaxda gashay nasasho & inay wadatashi dib ugu laabtaan saaxiibadooda kale.
Maanta ayaa qorshuhu ahaa in uu shirka dib uga bilaawdo Teendhada Afisiyooni ee Magaalada Muqdisho, hayeeshee Agaasimaha Warfaafinta ayaa xaqiijiyay in shirka uu Maanta dib u dhacay, isla markaana Maalinta berito ah la isu iman doono.
Sababaha uu dib ugu dhacay Shirka ayaa waxaa lagu sheegay in Magaalada Muqdisho uu ka maqan yahay Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoor Qoor) iyo in Madaxda Maalin kale oo nasasho ah ay qaadanayaan.
Shirka Afisiyooni oo ay qaban qaabadeeda leeyihiin Wakiilada Beesha Caalamka ayaa waxaa uu horudhac u yahay shirweynaha wadatashiga doorashooyinka ee la filayo Ia filayo in uu dhawaan ka furmo Magaalada Muqdisho.
Previous articleProf Cabdi Ismaaciil Samater oo Farmaajo ugu baaqay in Guddi Madax-bannaan uu ku wareejiyo Doorashada Dalka.
Next articleBurcad dhac iyo Dil ka geysatay Xaafadaha Degmada Kaaraan.